Zụta SoundCloud Reposts - SoNuker
Nsonaazụ Malite na 24-72 Awa
Nsonaazụ Na-aga n'ihu Ruo Mgbe O zuru ezu
Uru ndị dị a willaa ka m ga-ahụ ma ọ bụrụ na m zụtara SoundCloud Reposts?
Na-enyere aka inweta ntụkwasị obi ngwa ngwa maka profaịlụ gị & ozi gị
Na-agba Ndị Ọzọ Ume Ka I Soro Ntị Ha Na-ege Ntị
Ikwesighi ikesa profaịlụ ndị ọzọ na ọdịnaya
Nsonaazụ Ga-aga n’ihu Kwa ụbọchị ruo mgbe Iwu gị zuru ezu
Nsonaazụ bidoro na 24-72 Awa & Emechara n’ime ụbọchị ise
SoNuker na-anapụta Mgbe Karịrị Gị Iwu!
Ọ kwesịrị ka m zụta akwụkwọ nrụpụta SoundCloud?
Shouldkwesiri ịzụta akụkọ SoundCloud iji nyere aka gbasaa okwu ahụ na egwu na ọdịnaya gị dị ịtụnanya. Anyị ekenyela ọdịnaya gị n'ime ọtụtụ nyiwe Social Media iji bulie ikpughe egwu gị na ọdịnaya gị. Nke a ga - enyere gị aka ịdọta ndị egwu ọhụụ site na mpaghara ị na - agabatabeghị mbụ.
Ọrụ a ga - enyere gị aka inweta uto ịchọrọ iji mezuo ebumnuche gị na SoundCloud.
Kedu mgbe m ga-enweta ngbanwe ụda SoundCloud m?
Iwu niile amalite n’ime awa 24-72 ka etinyechara iwu gị. N'ọnọdụ ka ukwuu, a na-ebuga ọnụ ọgụgụ gị zuru oke nke akụkọ SoundCloud n'ime awa ole na ole edebere gị, mana mgbe ụfọdụ ọ ga - ewe ụbọchị ma ọ bụ abụọ, dabere na ole ị nyere iwu.
Anyị na-ewepụta ngwa ngwa Instagram anyị ngwa ngwa, yabụ ị ga - enweta ha n'oge.
Ọrụ a ọ na-etinye akaụntụ m n'ihe ize ndụ?
Ọrụ anyị dị mma nke 100% maka iji. N’adịghị ka ọtụtụ ndị na-enye ọrụ anyị anaghị arịọ ma ọ bụ jupụta paswọọdụ Social Media gị. Ya mere, anyị anaghị achịkwa akaụntụ gị ma ọ bụ na-agwa ya ka anyị mee ihe ọ na-ekwesịghị ịdị. Ndị ọrụ anyị na-enye na-anwale oge a na-apụghị ịgụta ọnụ ma na-aga n'ihu imelite ma nwekwaa na ngwa mgbasa ozi Social iji hụ na kacha mma na nsonaazụ kacha mma.
SoNuker.com anọwo na-enye ọrụ kachasị mma na arụmọrụ Social Media Marketing kachasị elu n'ịntanetị.
Nhọrọ nhọrọ azụta oge na-enweghị ndenye aha ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ugboro ugboro
Service Ndị Ndenye 50 YouTube ($ 20) Ndị Ndenye 100 YouTube ($ 30) Ndị Ndenye 300 YouTube ($ 45) Ndị Ndenye 500 YouTube ($ 60) Ndị Ndenye 1000 YouTube ($ 100)
Service 10 omenala YouTube Comments ($ 20) 20 omenala YouTube Comments ($ 35) 30 omenala YouTube Comments ($ 50) 50 omenala YouTube Comments ($ 80) 100 omenala YouTube Comments ($ 140)
Service Oge awa nke 100 YouTube ($ 60) Oge awa nke 500 YouTube ($ 250) Oge awa nke 1000 YouTube ($ 400)
Tinye na ụgbọ ibu Tinye na ụgbọ ibu Tinye na ụgbọ ibu
Ga-enwerịrị vidiyo Nkeji 60+
Service Ahịa 100 YouTube ($ 10) Ahịa 250 YouTube ($ 20) Ahịa 500 YouTube ($ 30) Ahịa 1000 YouTube ($ 50) Ahịa 2000 YouTube ($ 80) Ahịa 5000 YouTube ($ 130) Ahịa 10000 YouTube ($ 250)
Tinye na ụgbọ ibu Tinye na ụgbọ ibu Tinye na ụgbọ ibu Tinye na ụgbọ ibu Tinye na ụgbọ ibu Tinye na ụgbọ ibu Tinye na ụgbọ ibu
E tinyela ụda SoundCloud na ụgbọ ibu gị.
Egwuregwu 100 ($ 10) Egwuregwu 200 ($ 15) Egwuregwu 500 ($ 30) Egwuregwu 1000 ($ 45) Egwuregwu 2000 ($ 80) Egwuregwu 5000 ($ 150) Egwuregwu 10000 ($ 275) Egwuregwu 20000 ($ 500) Egwuregwu 50000 ($ 900)
Mmasị nke 100 ($ 15) Mmasị nke 200 ($ 30) Mmasị nke 500 ($ 45) Mmasị nke 1000 ($ 80) Mmasị nke 2000 ($ 160) Mmasị nke 5000 ($ 300) Mmasị nke 10000 ($ 500) Mmasị nke 20000 ($ 900) Mmasị nke 50000 ($ 1500)
Nbudata 100 ($ 10) Nbudata 200 ($ 15) Nbudata 500 ($ 30) Nbudata 1000 ($ 45) Nbudata 2000 ($ 80) Nbudata 5000 ($ 150) Nbudata 10000 ($ 275) Nbudata 20000 ($ 500) Nbudata 50000 ($ 900)